Wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo wada tashi la yeelatay ganacsatada | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo wada tashi la yeelatay ganacsatada
Wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo wada tashi la yeelatay ganacsatada
Muqdisho-(SNTV)-Wasaaradda qorsheynta Qaranka Soomaaliya ayaa Maanta kulan wada tashi ah oo ku saabsan horumarinta Dalka kula yeelatay Ganacsatada Soomaaliyeed Magaalada Muqdisho.
Kulankan wada-tashiga ah ee ku aaddan wareegga Labaad, qorshahiisa Sagaalaad horumarinta Qaranka Soomasliya, ayaa diiradda lagu saaray, qodobo ay ka mid yahiin, soo jeedin ku saabsan nuqalka koowaad ee qorshaha horumarinta Qaranka, soo jeedin waxyaabaha lasyku raacay iyo waxa dhiman ee ay tahay in lagu daro qorshaha.
Xubno ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, ayaa ayaa ka dhiibtay aragtidooda ku aaddan Qorshaha horumarinta Qaranka, waxayna ku fogaadeen hannaanka shaqo abuuka iyo in la dhiiri-geliyo ganacsiga, si Dalku uu u gaaro isku filnaansho dhaqaale iyo mid horumar.
Agaasimaha qorsheynta Qaranka Soomaaliya, Ased Yuusuf Qanyare, ayaa sheegay in ay ka Wasaarad ahaan ka go’an tahay siddii ummadda Soomaaliyeed looga qeyb-gelin lahaa qorshaha horumarinta Qaranka, isla markaana loo dhageysan lahaa talooyinka ku aaddan qorshaha si uu u noqdo qorshe ay wada leeyihiin umadda Soomaaliyeed.
“Sida aad la socoteen waxaan wareegga koowaad ee qorsahahan horumarinta Qaranka wada –tashi kala yeelannay dhammaan Bulshada Soomaaliyeeed oo aad qeyb ka tahiin , marka qorshahan waa mid ay wada leeyihiin umadda Soomaaliyeed, Ayuu yidhi Agaasime, Asad Yuusuf Qanyare.
Wuxuu sheegay Agaasimuhu in haddii la diyaariyo uu qorshahani saldhig u noqon doono in Soomaaliya laga cafiyo daynta lagu leeyahay, wuxuuna intaa ku daray in la soo koobi doono ahmiyadda la doonayo in la fuliyo, si xoogga loo saaro Dalka horumarkiisa , lana dar-dar geliyo.
Wasaradda Qorsheynta DFS, ayaa sidan oo kale wax ay wada-tashiga wareegga Labaad la yeelatay hay’adaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, si loo dhageysto talooyinkooda ku aaddan qorshaha horumarinta Qaranka iyo in loo soo bandhigay ahmiyadda Wareegga koowaad.
Previous articleMunaasabad ku saabsanayd is-dhexgalka Soomaaliya iyo Turkiga oo lagu qabtay Ankara
Next articleCiidanka DANAB oo dib u howlgelinaya Ceelbiyood maleeshiyada Al-Shabaab ka gubeen dadka deegaanka Ceel-saliini